Webhusaiti Dhizaini Service
MID-MAN - AGENCY WEBSITE DESIGN COMMIT UX/UI STANDARD ZVINODIWA
Kugadzira mawebhusaiti emhando yepamusoro kuMid-Man Agency. Kugadzira uye kugadzira mawebhusaiti anounza kukosha uye kushanda zvakanaka ndizvo zvinangwa izvo Mid-Man timu inovavarira iwe. Mid-Man ichakubatsira kugadzirisa dambudziko rekusvika vatengi kuburikidza nesevhisi, dhizaini yewebhusaiti, CREATIVE - OPTIMIZATION - SEO STANDARD - PROFESSIONAL uye EFFECTIVE.
URI KUPINDA MUZVINHU HERE KANA KUTUNGAMIRA KURASIKA?
Munguva yedhijitari tekinoroji 4.0, pamwe nekukurumidza kusimudzira kweInternet, maitiro ebhizinesi repamhepo kana kutengeswa kwepamhepo kwakaunza kubudirira kwehupfumi kumitsara yakawanda yebhizinesi muNyika Yese. Ko iwewe? Iwe unogadzira mawebhusaiti uye kutora chikamu mumusika webhizinesi reInternet?
Zvinoenderana ne2019 Southeast Asia e-commerce chirevo neGoogle, Temasek, uye Brain & Company, avhareji yekukura kweiyo nguva yese 2015-2025 ye e-commerce i29%. Nekukura kwekukurumidza kwakadaro, mukana wekuti iwe utore chikamu mumusika webhizinesi repamhepo wakavhurika.
Sekureva kweE-commerce Association (VECOM), kubva muna 2019, vangangoita makumi mana neshanu muzana emabhizinesi ane webhusaiti, ayo anosvika makumi matatu nenomwe muzana akawana maodha kuburikidza newebhusaiti. Kwete vatengi vezvitoro chete, vatengi vari mabhizinesi anoodha kuburikidza neakaundi webhusaiti chiyero chekusvika ku42%. Izvi zvinoratidza kuti vashandisi vanotendeuka zvishoma nezvishoma kutenga zvinhu pawebhusaiti pane kutenga zvigadzirwa zvechinyakare.
Zvichienderana neshanduko yekutenga maitiro panguva yeCOVID, mabhizinesi ane mawebhusaiti ave nemukana wekukwikwidza mumusika weInternet. Iwe unogona kunge uchitya pamusoro pekukwikwidzana nevatangiri, asi zvakare zvinogamuchirwa. Nekuti zvichibva pane zvakaitwa nevakwikwidzi vako, uyu mukana wekuti iwe udzidze, ruzivo, kuvandudza uye kugadzira webhusaiti yako.
Zvinoenderana nedata, kubva muna 2019, anosvika makumi mashanu neshanu muzana emabhizinesi ane budiriro yakagadzikana, uye 55% inoona webhusaiti iyi chishandiso chinobatsira kwazvo chekutengesa chigadzirwa. Naizvozvo, chinhu chekutanga uye chinodiwa izvozvi kugadzira webhusaiti iwe chete. Mid-Man ichakuperekedza, kugadzira dhizaini yewebhusaiti, uye kubatsira bhizinesi rako kuti risimudzire uye rigadziriswe.
MID-MAN inodada kuve inyanzvi webhusaiti dhizaini ine makore mazhinji eruzivo rwakasiyana-siyana mumusika weKushambadzira. Isu tichakuperekedza uye kukutsigira mukugadzira INOFANIRA, QUALITY, PRESTIGE, UYE PROFESSIONAL kutengesa webhusaiti. SATISFACTION yako iBASA reiyo yese webhu dhizaini TEAM paMID-MAN.
Musika ndiyo nzvimbo yehondo. Iyo webhusaiti ndiyo hwaro, arsenal, uye nzvimbo yeruzivo rwako. Kana iwe usati watova nemhando yepamusoro webhusaiti base, tanga kuivaka nhasi. Munguva ino yeshanduko yakasimba yedhijitari, kuve newebhusaiti hakuna kukwana. Kuve newebhusaiti uye, kuishandisa zvinobudirira, kubatsira kuvandudza mari ndicho chinangwa chaunoda kuvavarira. Kunze kwekukwezva webhusaiti dhizaini, iwe unofanirwa kuterera kune ruzivo rwemushandisi. Nekuti dhizaini yewebhu ine yakapusa uye yakareruka yekutenga maitiro uye ruzivo rwakakosha kuti iwe "uvhare maodha" nevatengi zviri nyore, MID-MAN AGENCY ine ecosystem yezvese zvekushambadzira mhinduro richava zambuko rekukubatsira kuti uswedere pedyo nevatengi vako vaunoda. pamusika weInternet.
Nesimba redhizaini yewebhu, yakajairika interface, uye ruzivo rwemushandisi, MID-MAN inodada kuve inotungamira QUALITY UYE PRESTIGE webhusaiti dhizaini unit.
NEI UCHIFANIRA KUGADZIRA WEBSITE?
Webhusaiti inzira yekutaurirana uye inotungamira bhizinesi chishandiso nhasi. Webhusaiti yakafanana nechiso chinomiririra iwe, bhizinesi rako, kana sangano rako padhijitari tekinoroji papuratifomu 4.0 IOT.
Zvakakosha, panguva yepamusoro peiyo Covid-19 denda, hupfumi hwepasirese hwakakanganiswa zvakanyanya. Maindasitiri mazhinji akakanganiswa zvakananga, senge kunze-kunze, kushanya, nezvimwe, asi mari kubva kutenga online kuburikidza nemawebhusaiti. Mawebhusaiti mazhinji emabhizinesi uye B2C e-commerce mapeji achiri kuwedzera ne20-30%, achitowedzera zvakanyanya nezvinhu zvakakosha uye michina yekurapa. Izvi zvinoratidza kuti shanduko yemaitiro ekutenga evashandisi iri kufamba zvishoma nezvishoma kuenda kumusika wepamhepo.
Neshanduko yedhijitari uye basa rakakosha rewebhusaiti nhasi, hapana chikonzero chekuti uzeze kugadzira webhusaiti uye kusimudzira mhando yako pamusika weInternet.
Webhusaiti dhizaini yakajairika SEO
Nyanzvi yewebhu dhizaini yakajairika SEO inoita kuti zvive nyore kwauri kukwirisa uye kuisa bhizinesi rako 'zvigadzirwa nemasevhisi paTOP yekutsvaga paGoogle. PaMID-MAN, iyo webhusaiti yakagadzirwa neSEO zviyero kubva panguva yekuvakwa kwewebhusaiti, yakagadziridzwa kubva kusource code kuenda kune maficha, OnPage uye OffPage, inopindura dhizaini, yakachengetedzwa neinjini yekutsvaga-inoshamwaridzika SSL protocol. ..
WEBSITE DESIGN FOUNDATION PAMID-MAN AGENCY
Kusiyana nemamwe mawebhusaiti edhizaini mayunitsi pamusika nhasi, MID-MAN haina kuganhurirwa kune mumwe mutauro kana dhizaini chikuva. Iyo MID-MAN mainjiniya timu ine muchinjika-chikuva kugona kugadzira WordPress, Laravel, React, React Native, Node JS… ichazadzisa yako yese webhusaiti dhizaini zvinodiwa.
NEI MID-MAN AKASARUDZA MULTI-PLATFORM WEBSITE DESIGN?
Fenicha inoonekwa seyakashandiswa art indasitiri. Naizvozvo, iyo yemukati dhizaini webhusaiti inoda kusangana neinoyevedza, inoyevedza, uye kuratidza chimiro chebhizinesi rako. Kuve newebhusaiti yemukati kunobatsira bhizinesi rako kukwidziridza brand yako uye kusvika kune yakakura faira yevanogona kuve vatengi pamusika weInternet.
KUBVA KUBVA KUSVIKIRA KUITA
MATANHO EKUGADZIRA WEBSITE YENYANZVI PAKATI-MURUME
MID-MAN, ine motto yebasa revatengi-centric, inogara yakanangana nemhinduro dzetsigiro dzevatengi mumabasa ekugadzira webhu. Isu tine nzira yekushanda yakatwasuka yekukushandirai zvakanyanya nehunyanzvi.
Vashandi veMID-MAN vane ruzivo vanosangana nevatengi, teererai mazano ekugadzira, uye kurukurai maficha aunoda mukugadzira webhu. Mushure mekubvunza mhinduro uye maficha anokodzera zvinangwa zvako uye zvaunoda, isu tinoronga dhizaini.
Kusaina nekushandira pamwe
Kuti tive nechokwadi chekodzero dzako, isu takabatana tinoita gwaro repamutemo. Kukwazisana kudiki kunoratidza mweya mukuru. MID-MAN ichave shamwari yako, ichikubatsira iwe kuvaka iyo chaiyo webhusaiti dhizaini mhinduro uye kusimudza mhando yako mumusika.
Zvichienderana nemafungiro ako, iyo MID-MAN webhusaiti dhizaini timu ine pfungwa dzekugadzira uye dzinopindura ichagadzira yakanaka, inoyevedza, uye UI/UX-yakajairwa demo webhusaiti madhizaini. Mushure mekutarisa demo, timu yedhizaini ichaita gadziridzo kuti iwe upedze dhizaini yakadzama.
Kubva padhizaini yatinayo uye ruzivo rwakaunganidzirwa mumakore mazhinji ekushanda, timu yevagadziri vezvirongwa inoronga UX yakajairwa hurongwa (ruzivo rwemushandisi) uye kushandisa webhu hurongwa kuti ive nechokwadi chakazara maficha akakosha uye akanakira webhusaiti yako.
Edzai uye gadzirisa
Panguva ino, dhizaini yako webhusaiti inenge yapera. Nekudaro, kugadzira chigadzirwa chakanakisa uye kuona kuti webhusaiti inoshanda zvakanaka uye nemazvo, iyo MID-MAN tekinoroji timu inoongorora nekugadzirisa isati yanyatsoiisa mukushanda.
Iyo yakazara handover ibasa reyese MID-MAN timu. Chikwata cheMID-MAN chinokutungamirira nevakazvipira uye vanofunga nezvewebhu admins. Kunyangwe purojekiti yapedzwa, timu yeMID-MAN inogara yakagadzirira kukutsigira mukushanda nekutonga webhusaiti.
NEI UCHIFANIRA KUSARUDZA MABASA EKUDANIRA WEBSITE PAZVINODIWA PAMID-MAN?
MID-MAN AGENCY ine chikwata chevashandi vane ruzivo mukugadzira mawebhusaiti ane maindasitiri mazhinji. Nemitauro yakasiyana-siyana yekugadzira, tinozadzisa zvese zvaunoda. Bata isu kuti uwane nyanzvi uye inoshanda webhusaiti dhizaini.
Webhusaiti yekusuma vanhu, zvitoro, uye epakati uye madiki mabhizinesi
General sales webhusaiti
Exclusive interface dhizaini pakukumbira: 1 peji rekutanga
Kugadziriswa kweganda remahara: kusvika ku3 nguva
Basic functional programming pane zvinodiwa
Webhusaiti maitiro: Basic
Programming Platform: Optional
Yakajairwa UI / UX Dhizaini - Mushandisi Interface uye Mushandisi Zvakaitika
Standard Inopindura - inoenderana nemabhurawuza mazhinji uye zvishandiso zvakaita sePC, malaptop, mahwendefa, uye nhare.
Kugadzirisa kukurumidza kurodha peji
Yemahara SSL chengetedzo yegore rekutanga
Kupa iyo source code (source code)
Hupenyu hwese waranti uye kugadzirisa
24/7 technical technical
Yepamusoro yekupedzisira webhusaiti dhizaini
Webhusaiti yekusuma zvitoro, mabhizinesi makuru
Webhusaiti yebhizinesi repamhepo, nhau, masevhisi, mari, yakasarudzika tekinoroji, yakakwirira mifananidzo…
Exclusive interface dhizaini pane inodiwa: Unlimited nhamba yematehwe
Yemahara ganda tweaks: Kusvikira ku5 nguva
Advanced functional programming pane zvinodiwa
Webhusaiti maitiro: Yepamberi
Yakabatanidzwa yakawanda-channel yekubatanidza neyechitatu bato
Yemahara Yakakwana Yekushambadzira Solution Consulting
Discounts pamusoro Marketing service fees
Standard Inopindura - inoenderana nemabhurawuza mazhinji uye zvishandiso zvakaita sePC, malaptop, mahwendefa, nharembozha, kufamba,…
NEI WEBSITE DESIGN PAMIKO TECH INE MITENGO YAWANDA?
Dhizaini yewebhusaiti yakagadziridzwa zvinoenderana neiyo yakakosha nzira inotarisana nevatengi vako ndicho chinangwa icho MID-MAN inovavarira. Isu tinonzwisisa kuti mune chero indasitiri yechero saizi, pane kudiwa kwehunyanzvi uye hunoshanda webhusaiti dhizaini. Naizvozvo, yedu webhu dhizaini masevhisi anogutsa vatengi vese nemutengo unonzwisisika.
KUPINDURA MIBVUNZO PAKUGADZIRA WEBSITE PAMID-MAN
UNOBVUNZA - MID-MAN MHINDURO
Unoda kudzidza zvakawanda nezve webhusaiti dhizaini masevhisi eMID-MAN? Tarisa mhinduro dziri pasi apa!
Chii chaunonzwisisa neWebhusaiti Dhizaini?
Webhu dhizaini kana webhusaiti dhizaini rinongori basa rekugadzira webhusaiti yemunhu, kambani, bhizinesi, kana sangano. Pane nzira mbiri huru dzeWebhu dhizaini: static web dhizaini uye ine simba webhu dhizaini. Kuti uwane rumwe ruzivo, ona chinyorwa Chii chinonzi webhusaiti dhizaini?
Chii chinonzi SEO standard web design?
Yakajairwa SEO webhu dhizaini iwebhusaiti ine zvigadziriso uye maficha anobvumira injini dzekutsvaga seGoogle, Yahoo, uye Bing… kukambaira nekunzwisisa webhusaiti yese zviri nyore. Ona iyo yakatsanangurwa chinyorwa cheanopfuura 3000 mazwi nezve SEO yakajairwa webhusaiti dhizaini
Chii chinopindura webhu dhizaini?
Inoteerera dhizaini yewebhu ingori nzira yekumisikidza nekuvaka mawebhusaiti anowirirana uye nekuaratidza pamhando dzese dzemagetsi, senge nhare, mahwendefa, malaptop, maPC, nezvimwewo ... nechero resolution, chero webhu furemu.
Marii kugadzira webhusaiti ino kunodhura?
Zvichienderana nezvinodiwa uye maficha ewebsite yega yega, iyo dhizaini yedhizaini inopa dzakasiyana dhizaini yekugadzira webhusaiti.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti upedze kugadzira webhusaiti?
Nguva yekupedzisa webhusaiti ichaenderana nezvakawanda zvinhu zvakaita senzvimbo iyo webhusaiti irikuvavarira, vatengi; kuchinjana marongerwo nevabatsiri, nyore kana yakaoma interface; webhusaiti kushanda, uye zvimwe zvinhu. Nguva yekugadzira webhusaiti paMID-MAN inowanzobva kumavhiki e3-4, maererano nekutsinhana nevabatsiri.
Mugadziri wewebhusaiti ane chibvumirano chakajeka here?
MID-MAN yakazvipira kuve nekondirakiti yese kuchengetedza zvido zvevadyidzani, kuve nechokwadi chekutendeseka, kubuda pachena, uye kuvimbika pakushandira pamwe.
Nezviitiko zvese, kuzvipira uye hunyanzvi, Mid-Man ane chivimbo inopa mabhizinesi mhinduro yakanakisa yekugadzira webhusaiti webhusaiti deisgn.
Nharembozha 1: +84 90 3401508
Nharembozha 2: +1 (484) 414-5687
Trang webhu: https://mid-man.com/
© 2021 Mid-Man - Yakavimbika Webhusaiti Dhizaini Solution Yepamhepo Bhizinesi
Ndapota sarudza chat kuti utange kutumira mameseji.